तेस्रो विश्वयुद्धबारे नास्त्रेदमसको सान्दर्भिक भविग्यवाणी « News of Nepal
साधना – वर्ष ९ | अंक ११ | पूर्णाङ्क ९४ | मंसिर २०५८
सन् २००१ सेम्टेम्बर ११ का दिन स्थानीय समयअनुसार बिहान ८:४५ बजे न्यूयोर्क सहरको गौरव विश्व व्यापार केन्द्र रहेका जुम्ल्याहा भवन मध्ये उत्तरी भवनमा एउटा यात्रुबाहक जेट विमान आएर ठोक्किंदै भित्र पस्यो । त्याहाँ ठुलो विस्फोटका साथ आगो दन्किन थाल्यो । त्यसको ठीक १८ मिनेटपछि अर्को यात्रुबाहक जेट विमान यसैगरि आएर दक्षिणी भवनभित्र पस्यो । हेर्दाहेर्दै त्यो भवन पनि आगो र धुवाँको मूस्लोभित्र हरायो । दुवै भवनलाई केही क्षणमै आगोले ध्वस्त पार्यो ।
प्हिलो जहाज ठेक्किएको ठीक ५८ मिनेटपछि संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली स्थान मानिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा अर्काे जे विमान ठोक्काएर त्यसलाई पनि ध्वस्त पारियो । यी सबै आक्रमणहरु कुनै शत्रु राष्ट्रद्वारा नभई आतंककारी समूहद्वारा गरिएका थिए र तयस आक्रमणकारी समूहभित्र अमेरिकी नागरिकता पाएका केही अरबीहरू पनि भएको अनुमान गरिएको छ । अमेरिकालाई कुनै विदेशी राष्ट्रसँग युद्ध गर्न त्यति गाह्रो नहुनसक्छ, तर जसको कुनै सेना र निश्चित ठेगाना छैन, त्यस्तो आतंकवादी समूहसँग कसरी युद्ध गर्ने ? यसले अमेरिकालाई अन्धो सिंह जस्तो बनाएको छ ।
अमेरिकामाथि गरिएको भीषण आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले ठूलै युद्धको तयारी गरिरहेको छ । हाल अमेरिकाले गर्न लागेको युद्धलाई विश्वका कतिपय मानिसहरु निहट भविष्यमा हुने तेस्रो विश्वयुद्धका रुपमा हेरिरहेका छन् । के यी मानिसहरुले सोचेजस्तै अब हुन गइरहेको युद्ध तेस्रो विश्वयुद्ध नै हो त ?
यस सन्दर्भमा विश्वप्रशिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमसले आजभन्दा लगभग साढे चार सय वर्षअघि गरेको भविष्यवायाी सान्दर्भिक देखिन्छ । उनले तेस्रो विश्वयुद्धबारे धेरै भविष्यवाणीहरु गरेका थिए । ती भविक्ष्यवाणीहरु अध्ययन गर्दा तेस्रो विश्वयुद्ध धार्मिक कारणबाट हुुने निष्कर्ष निक्लन्छ । हाल अमेरिकामा गरिएको आक्रमणलाई केही अरबीहरूले ‘जेहाद’ को नाम दिएका छन् । जेहादको अर्थ धार्मिक युद्ध हो । यसबाट के अर्थ निस्कन्छ भने धार्मिक युद्धले विश्वयुद्धको रुप लिन मात्र बाँकी छ । यसले विश्वयुद्धको रुप कहिले लिने हो ? यसबारे नास्त्रेदमसले गरेको भविक्ष्यवाणीको विश्लेषण सान्दर्भिक छ ।
तेस्रो विश्वयुद्ध शुरु हँदाको बेला ग्रहगोचरी अवस्थाको वर्णन गर्दै नास्त्रेदमसले लेखेका छन् – ‘वृहस्पति तथा शनि जब मेष राशिमा एकसाथ हुनेछन्, ठीक त्यसै बेलादेखि बर्बादी शुरु हुनेछ ।’ पश्चिमी ज्योतिष सिद्धान्तअनुसार सन् १९९९ मार्च १४ मा शनि र वृहस्पति दुवै ग्रह मेष राशीमा थिए । त्यसको ठीक ८ महिनापुर्व केन्याको नैरोवी र तान्जानियाको दाचर ए सलामस्थित अमेरिकी दुतावासहरुमा भीषण बम विस्फोटन गराइएको थियो । उक्त विस्फोटनमा २ सय २४ जा मारिएका थिए भने हजारौं घाइते भएका थिए । उक्त बमकाण्डाई पनि जेहादको नाम दिइएको थियो र त्यस बमकाण्डको जिम्मेवारी पनि ओसामा बिन लादेनको समूहले लिएको थियो ।
नास्त्रेदमसले भविक्ष्यावाणी गरेका कतिपय मितिहरु धेरथोर यताउता हुने गर्छन् र यो उनले जानीजानीकन गरेका थिए भनिन्छ । उनले दिएको उपरोक्त ग्रहगोचरीय योग तथा विगत दुई वर्षयता भएका घटनालाई केलाउँदा तेस्रो विश्वयुद्धको शुरुआत भएको संकेत मिल्छ । नास्त्रेदमसका अनुसार तेस्रो विश्वयुद्धमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा झैं विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरु दुई समूहमा विभाजित हुनेछन्. ।
इस्लामिक राष्ट्रहरु र चीन मिलेर एउटा संयुक्त आक्रमणकारी समूह बनाउनेछन् । यस समूहलाई ‘इस्टर्न–फोर्स’, ‘चीन–अरब फोर्स’, ‘चीन–मुस्लिम फोर्स’ आदि नाम दिइएको छ भने अर्काे समूहलाई ‘वेस्टर्न फोर्स’ ‘रुसी–अमेरिकी सेना’ आदि नाम दिइएको छ । नास्त्रेदमसका भभिष्यवाणीहरु क्रमिकरुपमा छैनन् । उनले गरेका भविस्यवाणीहरुलाई क्रमिकरुपमा बुझ्ने प्रयास गर्दा तेस्रो विशवयुद्धमा हुनसक्ने प्रमुख घटनाहरुको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार देखिन्छ :
तेस्रो विश्वयुद्धको म्रमुख कारण धर्म नै हुनेछ । चीा–मुस्लिमहरुको संयुक्त फैजले युरोपका धेरैजसो सहरहरुलाई ध्वस्त पार्नेछन् । ध्वस्त पार्ने क्रममा यिनीहरु एटम–बम, जैविकीय अस्त्र तथा हाइड्रोजन बमसमेत प्रयोग गर्न पछि पर्नेछैनन् । अन्तरिक्षबाट लेसर किरणद्वारा आक्रमण गरिनेछ । अन्तरिक्षबाट प्रयोथ गरिने लेसर किरणका बारेमा भनिएको छ –‘रोग फैलाउने गरंगहरुल आर्कटिक क्षेत्रतिरबाट आउने बदलासँगै धेरै टाढा जानेछन् र यही मौकामा धातुबाट बनेको र पखेटा भएको एउटा गोलाकार यान पृथ्वीदेखि २ सय ७० माइल माथि आकाशमा हुनेछ । त्यतिखेर अन्य देशहरुको कानुनतर्फ ध्यान दिइनेछैन ।’
यसैक्रममा पूर्वी सेनाको संयुक्त दटोलीले टर्की, ग्रीस, युगोस्लाभिया, फ्रन्स, इटाली, इंग्ल्यान्ड आदि प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरुमाथि अत्याधुनिक आणविक अस्त्रहरुद्वारा आक्रमण गर्नेछन् । उक्त आक्रमणबाट ब्रिटेनजस्तो शक्तिसम्पन्न राष्ट्र लाचार हुनेछ । प्रान्स एवं इटालीलाई तहस–नहस पारेपछि इटालीमा पूर्वी सेनाद्वारा सैनिक हेडक्वार्टर स्थापना गरिनेछ । पेरिस सहरलाई आणविक अस्त्रद्वारा मानवविहीन बनाइनेछ । त्यसपछि उक्त आक्रमणकारी फौजद्वारा स्वीट्जरल्यान्डलाई पराजित गरी बैंकमा रहेको सम्पूर्ण धन–सम्पत्ति हत्याइनेछ । यसखाले विनाशकारी युद्ध यसअघि कहिल्यै नलडिएको अपूर्व युद्ध हुनेछ ।
एकपटक पराजित भइसकेपछि पनि इंग्ल्यान्डबासीहरु पुनः संगठित भई युरोपलाई शत्रुको पञ्जाबाट फिर्ता गर्न प्रयासरत हुनेछन् र यसका लागि क्यानडामा योजना बन्नेछ । तत्पश्चात् सीमित आणविक अस्त्रहरुको प्रयोगबाट अंग्रेजहरुले केही सफलता पाउनेछन् । तर यसबाट चिनियाँ जनरल अत्यन्तै क्रेधित हुनेछन् र अझ विनाशकारी आणविक बमहरुको प्रयोग गर्नेछन् । परिणमस्वरुप सम्पूर्ण दक्षिण–पश्चिमी फ्रान्स जलेर खरानी हुनेछ र उक्त चिनियाँ जनरल पनि आफैंले छोडेको आणविक बमबाट मर्नेछ ।
चीन–अरब सेनाले विनाश गर्दै गरेको बेला युरोपमा विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपहरु देखा पर्नेछन् । भीषण बाढीले गर्दा फ्रान्स तथा इंग्ल्यान्डका त्रेरैजसो भागहरु तलाएमा परिणत हुनेछन् । एकपटक पराजित भइसकेपछि पनि चिनियाँ सेनाद्वारा फ्रान्स, इंग्ल्याँड, जमनी तथा अस्ट्रियामाथि पुनस् आक्रमण गरिनेछ । जर्मन सेनासँग भयंकर युद्ध हुनेछ र अन्तमा सम्पूर्ण जर्मन सैनिकहरु मारिनेछन् । त्यसपछि पूर्वी सेनाले हल्यान्ड तथा बेल्जियमलाई आफ्नो कब्जामा लिनेछ ।
यसरी युरोपमाथि पूर्ण विजय हासिल गरिसकेपछि निनियाँ – अरब संयुक्त सेनाद्वरा अमेरिकामा आणविक आक्रमण गरिनेछ । यस आक्रमणमा अमेरिकका धेरैजसो नगरहरु ध्वस्त पारिनेछन् । ४५ डिग्री अक्षंशमा पर्ने कुनै सहरमाथिको आकाश आगोको अपेटामा पर्नेछ । अनि त्यसपछि रुसी अमेरिकी संयुक्त सेनाद्वारा पूर्वी सेनाविरुद्ध किटाणु ग्यासको प्रयोग हुनेछ । यसको लगत्तै रुसमाथि पूर्व–पश्चिम र दक्षिण गरी तीनै दिशातिरबाट आक्रमण गरिनेछ । तर रुसी सेनाद्वरा सही मौकामा रासायनिक ग्यासको प्रयोग गरिनेछ । जसले गर्दा आक्रमणकारी फौज नराम्ररी परिजित हुनेछ । त्यसै बेला पूवी सेनाको संयुक्त टोलीले भारत, बर्मा, श्रीलंका, जापान लगायतका एसियाली राष्ट्रहरुमाथि आक्रमण शुरु गर्नेछन् । यस आक्रमणकार सेनको आक्रमण अमेरिकामा लगातार जारी रहनेछ र अमेरिकी सेनालाई पराजित गर्नै लागेको बेला त्यहाँ रुसी सेना पुग्नेछ अनि हुनेछ रात दिनसमम धमाधम युद्ध, जुन युद्धमा चीन–अरब सेनाका संयुक्त तोली नराम्ररी पराजीत हुनेछन् । यहीबाट शुरु हुनेछ पूर्वी सेनाको पराजयको सिलसिला ।
अनि बल्ल पश्चिमी संयुक्त सेनाद्वारा पूर्वी सेनाको कब्जामा पुगेका समपूर्ण राष्ट्रहरुलाई स्वतन्त्र गर्ने अभियान चालिनेछ । पोपलाई पुनः रोममा ल्याइनेछ । नष्ट गरिएका नगरहरुको पुनर्निर्माण शुरु हुनेछ । तर इजरायल यति नराम्ररी ध्वस्त हुनेछ कि त्यहाँ वर्षाैसम्म मानववस्ती बस्न सक्नेछैन ।
तेस्रो विश्वयुद्ध कतिखेर समाप्त हुनेछ भन्नेबारे ग्रह–गोचरीय विश्लेषण गर्दै नास्त्रेदमसले लेखेका छन्– ठीक त्यसै बेला भध्यपूर्वको सुल्तान आफ्नै मूख्यालयमा मारिनेछन्, सम्पूर्ण युरोप, रुस र अमेरिकाको कब्जामा हुनेछ, युरोपमा गोलाबारी, तोप एवं रकेटबाचट ध्वति निक्लन बन्द भइसकेको हुनेछ र अरब सेनाको अन्तिम सैनिकगणले विद्रोह गरी आफ्नो कमाण्डरलाई आत्मसमर्पण गनर्ए बाध्य पार्नेछ । त्यतिखेर मात्र तृतीय विश्वयुद्ध समाप्त हुनेछ । माथि भनिएभैँ शनि र मंगलको वृश्चिक राशिमा योग सन् २०१४ जुलाई २४ मा हुनेछ ।
नास्त्रेदमसले एउटा अर्को ज्योतिय निष्कर्ष दिँदै भनेका छन्– ‘शनि र मंगल सिंह राशिमा एकसाथ भएको बेला तेस्रो विश्वयुद्धको वास्तविक सुरुआत हुनेछ । ’ उक्त ग्रहस्थिति सत् २००६ जून ७का दिन बन्नेछ । अर्थात् शनि र मंगल तयस दिन सिंह राशिमा एकसाथ हुनेछन् ।
यदि तेस्रो विश्वयुद्ध एक्कइसौं शताब्दीमा भएमा नास्त्रेदमसले भनेजस्तो ग्रह–गोचरीय योगहरु माथि भनिएझैं वर्तमान सेरोफेरोमा मात्र देखापर्छन् । यस खाले योगहरु विशेषगरी शनि र वृहस्पतिको मेष राशिमा संयोग एक्काइसौं शताब्दीभरि पुनः नहुने देखिन्छ । पैसा र धर्मले अन्धो भएको समुदाय के आगामी १०० वर्षमा युद्ध नगरि चुप लागेर बस्न सक्ला ? विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
उपरोक्त ग्रह–गोचरको विश्लेषणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने तेस्रो विश्युद्धको प्रारम्भिक भूपिका शुरु भइसकेको छ । सन् २००६ को जून महिनाको आसपासमा साँच्चिकै युद्ध शुरु हुनेछ र सत् २०१४ जुलाईसम्म लगातार चलिरहनेछ । नास्बेदमसको भविक्ष्यवाणीअनुसार यदि उपरोक्तm अवधिभित्र युद्ध नभएमा एक्कइसौं शताब्दिभित्र विश्वयुद्ध हुनेछैन ।
नास्त्रेदमसले तेस्रो विश्वयुसद्धमा मुस्लिमहरुको प्रमुख भूमिका हुनेछ भनी आजभन्दा साढे चार सय वर्षपूर्व भनिसकेका थिए । साढे चार सय वर्षपूर्व इस्लाम आजझैं विश्वभरि फैलिसकेको थिएन र शायद अन्य धर्महरुको तुलनामा कमै फैलिएको थियो । कमजोर अवस्थामा रहेको इस्लाम धर्मलाई अनुमानकै भरमा भविष्यमा सबभन्दा शतिक्तशाली हुनेछ भनेर पक्कै पनि नभनिएको हुनुपर्छ । त्यसैले कालजयी भविष्यवक्ताले भनेको तेस्रो विश्वयुद्ध भविष्यको कुनै अवधिमा निश्चयननै हुनेछ तर कहिले हुनेछ, त्यसबारे किटानीसाथ भन्न भने सकिंदैन ।
चीन एवं मुस्लिमहरुकै कारणबाट विश्वयुद्ध हुनेछ भनेर नास्त्रेदमसले भनेका छन् । इस्लाम धर्मबारे केही चर्चा यहाँ प्रासंगिक हुन आउँछ । अहिले इस्लाम धर्मावलमबीहरु नभएको देश विश्वमा कहीं पनि छैन । इस्लामको विशेषता के हो भने योे चाहे भेनेजएलामा होस् अथवा घानामा, अमेरिकामा होस् अथवा रुसमा, यसको राष्ट्रियता इस्लाम नै हो ।
हालैका घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा इस्लामले विश्वकै सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकालाई ललकारेको छ, अमेरिकाको मुटुमा प्वाल पारेको छ । इस्लामले रयिालाई पनि छाडेको छैन । चेचेन्या युद्ध इस्लामकै पराक्रमको परिणाम हो । अर्काे शक्तिशाली राष्ट्र चीनलाई परि इस्लामले तर्साएको छ तर आक्रमण भने अझै गरेको छैन । भारतलाई वितल सात–आठ सय वर्षदेखि इस्लामले ढाक्दै आएको छ । अब निकट भविष्यमै यसले भारतलाई दुबोलेझैं ढाकेर निमिट्यान्नै पार्न बेर छैन । परिवार नियोजन नगर्ने धर्म भएकोले निश्चय नै आगामी सय वर्षभित्रैमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या मुस्लिमहरुको हुनेछ । साँच्चिकै मुस्लिमहरु आगामी तीन सय वर्षसम्म युद्ध नगरी बसे मात्र पनि पूरै विश्व इस्लामहरुकै हुनेछ । यसको प्रमुख कारण के हो भने हालका वर्षहरुमा साठी प्रतिशत पश्चिमेली महिलाहरु गर्भवती नै हुन छाडेका छन् र यसरी गर्भवती नहुने फेशन विस्तारै पूरै शिन्वभरि फैलिदैछ । तर यस फेशनको प्रभाव मुस्लिम समाजमा भने अन्य धर्मावलम्बीहरुको जनसंख्या वृद्धिदर माइनसमा जानेछ र इस्लामहरुको प्लसमा । अन्ततोगत्वा इस्लामहरुको भीडभित्र रहेका अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरु मुस्लिम बन्नेछन् । यदि मुस्लिम बन्न नमानेमा तिनीहरुको हविगत के हुनसक्छ, हामी सबैलाइै थाहा भएकै हुरा हो ।
नास्त्रेदमसले एक स्थानमा लेखेका छन्– ‘हेर मेरो आँखाबाट झर्दै गरेका आँसुहरु ! ईसाइहरुको सर्वनाश म देखिरहेछु ।’ नास्त्रेदमस समर्पित ईसाइ थिए र सम्पूर्ण ईसाइहरुलाई सखाप पार्दै गरेको दृश्य हेर्दा उनका आँखाबाट आँसु झरेका थिए । यहाँ दुईवटा अर्थ लाग्न सक्छन् । पहिलो अर्थ हुनसक्छ – होही ईसाइहरुको हत्याको दृश्यले आँखाबाट आँसु आएका थिए, दास्रो अर्थ सम्पूर्ण ईसाइहरुको विनाश देखेर आँसु आएको भए तेस्रो विश्वयुद्ध मुस्लिमहरुले जितेको भविष्यावाणी हुनेथियो । जबकि तेस्रो विश्वयुद्ध ईसाइहरुले जित्नेछन् भनी भविष्यवाणी गरिएको छ । भविष्यवाणी लेख्दै गर्दा नास्त्रेदमसका आँखाबाट झरेका आँसुले कतै उनले लेखेको तेस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम परिणाममा फेरबदल त भएको छैन भन्ने शंका भने पक्कै पनि उब्जिन जान्छ ।
प्रस्तुति :- ज्यो. रामानन्द शर्मा
स्रोत :- The complete prophecies of Michel Nostradamus
– नास्त्रेदमसकी सम्पूर्ण भविष्यवाणियां
नास्त्रेदमस को हुन् ?
नास्त्रेदमसको जन्म सन् १५३० डिसेम्बर १४ मा फ्रान्समा भएको थियो । उनी जन्मदा उनका बुबा आमा यहुदी थिए, तर सन् १५१२ मा नास्त्रेदमसको परिवार क्याथोलिक ईसाइमा परिवर्तन भयो । नास्त्रेदमसको पूरा नाम मिशेल द नास्त्रेदमस थियो । नस्त्रेदमसले मौंटेपेलिअर विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रमा डक्टरेट गरेका थिए र अध्ययनपछि त्यसै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापको जागिर पाएका थिए । चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्न रुचि नभएकोले उनले प्राध्यापको जागिर परित्याग गरे ।
नास्त्रेदमसले जीबनमा दुईपटक विवाह गरे । पहिले विवाह सन् १५३४ मा र दोस्रो विवाह सन् १५४६ मा गरेका थिए । पहिली श्रीमतीको मृत्यु भएपछि दोश्रो विवाह गर्न उनी बाध्य भएका थिए ।
नास्त्रेदमसका बारेमा उनकै शिष्य जीन द शविग्नेद्धारा ‘ब्रिफ डिस्कोर्स अन द लाइफ अफ मिस्टर मिशेल द नोस्त्रेदम’ नामको किताबमा संक्षिप्त विवरण यसरी दिइएको छ ।
उनी मझौला कदका थिए । स्वस्थ, प्रसन्न चित्त तथा जाँगरिला एवम् क्रियाशील थिए । आँखीभौं गोलाकार तथा भरिपूर्ण थिए । नाक सीधा र चुच्चो परेको थियो भने खैरा रंगका उनका आँखामा कोमलता झल्कन्थ्यो तरा तिनै आँखामा कोमलता झल्कन्थ्यो तर तिनै आँखा रिसाएको बेला ज्वाला बन्दथे । उनी आकर्षक एवम् प्रभावशाली ब्यक्तित्वका धनी थिए । बूढो भएपछि पनि उनका गाला चाउरी परेका थिएनन्, पोटिला र पुष्ट थिए । पाँचै इन्द्रियहरु स्वस्थ थिए । उनको दिमाग युवावस्थाकै जस्तो थियो र त्यसलाई चाहेजति उनी उपयोग गर्दथे । उनले गरेका फैसलाहरु सही र सत्य हुन्थे र उनको स्परणशक्ति गजवको थियो । उनी धीर एवम् गम्भीर प्रकृतिका थिए । धेरै सोच्थे तर कम बोल्थे । आवश्यकतानुसार बहस गर्न पनि पछि पर्दैनथे । तैपनि उनको स्वभाव धेरै सोस्ने कम बोल्ने खालको थियो । उनी केवल चार घन्टामात्र सुत्थे र उनी नैतिक, चरित्रवान्, आस्थावान् एवम् संस्कारवान् थिए । साथै धर्म–अध्यात्मप्रति समर्पित थिए र अध्यात्मबिना मुक्तिको अर्को कुनै साधन छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए ।
नास्त्रेदमस रातभरि अध्ययन–लेखनमा व्यस्त हुन्थे र बिहानीपख सुत्दथे । उनी दिउँसो मात्र बाहिर निक्लन्थे । सन् १५५० मा चिकित्सा पेसालाई परित्याग गरेर त्यसपछिका वर्षहरुमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक भविष्यवाणीहरु निकाल्न थालेका थिए । ती वार्षिक भविष्यवाणीहरु प्रसिद्धिको चरम सीमामा पुगेका थिए । सन् १५५४ तिर उनले भविष्यवाणीले मात्र भरिएका सेन्चुरीहरु (शतक) प्रकाशित गर्ने योजना बनाए । सय छन्दको कविताले युक्त अध्यायलाई सेन्चुरी भनिन्छ ।
सन् १५५५ सम्ममा नास्त्रेदमसले ‘प्रोफिसिज’ नामक पुस्तक लेखिसकेका थिए । त्यस पुस्तकमा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो सेन्चुरीको प्रथम भागसमेत छपाउन लागिसकेका थिए भनिन्छ । यस भागमा चर्च, ईसाइ धर्म तथा पोपको प्रभुत्वप्रति असहनीय भविष्यबाणीहरु गरिएका थिए ।
पहिलो सेन्चुरीको पहिलो छन्दमा नै भविष्यवणी गर्ने तरिकाबारे व्यहोरा दिंदै नास्त्रेदमसले भनेका छन् – ‘रातको समयमा आप्mनो एकान्त अध्ययन कोठामा बसेर म पितलबाट बनेको ओदानमा राखिएको भाँडाको सहायताबाट भविष्य देख्छु । एकाएक एउटा पातलो आगोको ज्वाला देखाइदिन्छ र भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भइहाल्छ’ ।
दोस्रो छन्दमा यस पद्धतिबारे अझ स्पष्ट पार्दै भन्छन्– ‘म आप्mनो चमत्कारी डण्डालाई ओदानका खुट्टाहरुको केन्द्रबिन्दुलाई ध्यान गरेर भाँडाभित्र राख्छु र अर्को भाँडाभित्रबाट पानी लिएर आफूले लगाएका खुट्टालाई पनि भिजाउँछु । ठीक त्यतिखेर मलाई आवाज सुनाइदिन थाल्दछ र मलाई सबै कुरा देखेको जस्तो भान हुन्छ । मानौ यस्तो हुन्छ कि भगवान् मेरै पासमा बसेर पो सबै नाटक गराउँदै हुनुहुन्छ ।’
नास्त्रेदमसले पछि गएर भविष्यवणी गर्न सिकाउने सम्पूर्ण साहित्यलाई नष्ट गरे । यो साहित्य कुनै दुष्टात्माको हातमा नपुगोस् भन्ने ध्येयले नष्ट गरेको तर्क नास्त्रेदमसले दिएका छन् ।
तत्कालीन फ्रान्सको राजघरानासँग कैथरिन महारानी । हेनरी दितीय भविष्यवाणीमा त्यति विश्वास राख्दैनथे । नास्त्रेदमसले उनलाई घोडसवारी नगर्न चेतावनी दिएका थिए, तर उनले मानेनन् । अन्ततोगत्वा उनको मृत्यु घोडसवारीको कारणबाटै भएको थियो । सन् १५५५ तिर नास्त्रेदमस फ्रान्सका शाही सल्लाहकार तथा चिकित्सक नियुक्त गरिए ।
उनको मृत्यु सन् १५६६ को जुलाई महिनामा भएको थियो । उनले आप्mनो शिष्य शविग्नेलाई अघिल्लो साँझ नै आफू अर्को दिन बिहान नहुँदै पार्थिव शरीर त्याग्ने जानकारी दिइसकेका थिए । नभन्दै अर्को दिन बिहान उनको मृत शरीर बेन्चमाथि पल्टिएको पाइयो । सन्त लारेंच चर्चको नजिकै रहेको कब्रिस्तानमा उनको लासलाई गाडियो । त्यातिखेर उनकी श्रीमती एन पोंसार्त गमैलेद्धारा नास्त्रेदमसको शव गाडिएको समाधिमा राखिएको शिलालेख उक्त कब्रिस्तानमा आज पनि देख्न पाइन्छ ।
उक्त शिलालेखमा लेखिएको छ – ‘यहाँ गाडिएको छ सर्वाधिक प्रतिभावान् मिशेल नास्त्रेदमसका पवित्र अस्थिहरु, सबै नाशवान्हरुमध्ये एकमात्र जसले आप्mनो दैवीय लेखनीद्धरा ग्रह–नक्षत्रहरुको चाललाई हेरेर भविष्यमा हुने सम्भावित परिवर्तनहरु तथा घटनाक्रमको हुलिया दिन सक्दाथ्यो। ६२ वर्ष ६ पहिना १७ दिन पुग्दा सन् १५६६ मा उनको मृत्यु भयो । यहाँ आउने महानुभावहरुले उहाँको चिरशान्ति भंग नगर्नुहोला । उहाँकी पत्नी एन पोंसार्त गमैले आप्mनो जीवनसाथीको चिरशान्तिको कामना गर्दछ ।’
नास्त्रेदमसले गरेका केही भविष्यवाणीहरु
‘बुलडग राजनीतिबाट लखेटिनेछ । ’ यो भविष्यवाणी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलसँग मिल्छ । उनलाई सन् १९३९ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउँदा बुलडगको कार्टुन बनाएर ब्रिटिश प्रेसले छापेको थियो ।
‘युरोपको धेरै भित्र पश्चिममा गरिब परिवारमा एउटा बच्चा जन्मनेछ, जसले आफ्नो सम्मोहन बोलीद्वारा धेरैलाई आफ्नो पक्षमा पार्नेछ । उसको ख्याति पूर्वी साम्राज्यमा समेत हुनेछ । ’
यो हिटलरबारे गरिएको भविष्यवाणी हो । हिटलर गरिब परिवारमा जन्मेका थिए । उनको भाषणमा जादुयुक्त सम्मोहन थियो र भाषणद्वारा जर्मनहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए । तत्कालीन पूर्वी साम्राज्य जापानमा उनको ठूलो प्रतिष्ठा थियो ।
‘मामुली परिवारको बदमास केटो इटालीको भाग्यविधाता बन्नेछ तर उसको अन्त्य धेरै नराम्रो हुनेछ । ’ यो भविष्यवाणी बेनिटो मुसोलिनीसँग मिलेको थियो । मुसोलिनी बदमास प्रवृत्तिको व्यक्ति थियो । इटालीको सर्वेसर्वा पनि बन्यो र सन् १९४५ अप्रिल २८ मा उसलाई उँधो मुन्टो लगाएर गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
‘निष्कासित महिलाले पुनः सत्ता पाउनेछिन् । पहिलेको तुलनामा प्रबल बहुमतसाथ उसको आगमन हुनेछ र उनको शासन प्रबल हुनेछ । तर उनका दुस्मनहरु षड्यन्त्रकारीहरुसँग मिल्नेछन् र तीन कम सत्तरी वर्षमा उसको मृत्यु निश्चित छ ।’
यो स्व. इन्दिरा गान्धीसँग मिलेको भविष्यवाणी हो । वास्तवमा श्रीमती गान्धी सन् ७७ को चुनावमा पराजित भएपछि अढाइ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पदबाट च्यूत भएकी थिइन् । सन्र ८० को चुनावमा प्रबल बहुमतका साथ उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पुगेकी थिइन् । उनको मृत्यु पनि तीन कम सत्तरी अर्थात् ६७ वर्षमा षड्यन्त्रकारीहरुद्वारा नै गोली हाने भएको थियो ।
‘पाइलटलाई प्रधानमन्त्री बनाइनेछ । उसले सात वर्षसम्म शासन गर्नेछ र अन्त्यमा एउटी काली महिलाद्वारा मारिनेछ । ’ राजीव गान्धी वास्तवमा पाइलटबाट प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए र प्रधानमन्त्री बनेको सात वर्षपछि एलटीटीईको षड्यन्त्रमा काली महिलाद्वारा मारिएका थिए ।
राजदरबारमा गोलीकाण्ड, कयौं हताहत, राजारानी र युवराजको अवस्था
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा मलाई देऊ, यतीले भन्दा ५० करोड बढि दिन्छु’
सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा मुलुकभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई..
सपरिवार त्रिशुलीमा हाम फालेका विनयविरुद्ध कर्तव्य..
ह्यारी र मेगनद्धारा शाही उपाधि र..
विद्युत् प्रसारण लाइन उद्घाटनमा झडप, गोली चल्यो
बिहेको कुरा चलिरहेको बेला सिंहले गरे आफ्नी प्रेमिकाको हत्या
सपरिवार त्रिशुलीमा हाम फालेका विनयविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा
‘व्यवस्थित र सुन्दर बाह्रविसे निर्माणका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु’: मेयर शेर्पा
कुटपीट गरि श्रीमतीको हत्या गर्ने कारागार चलान
न्यासुरले अझै पाएनन् न्यायः भन्छन्,‘माओवादीले धोका दियो’
१४ फेब्रुअरीमा लगनगाँठो कस्दै चर्चित गायिका नेहा कक्कड
अष्ट्रियामा शुरु भयो विशाल पर्यटन महोत्सव (फोटोसहित)